Ciidanka Turkiga ee ku sugan Soomaaliya oo mudo kordhin loo Sa... | Universal Somali TV
Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa dood ka yeeshay mustaqbalka ciidanka kaga sugan xeebaha dalka ee dagaalka kula jira kooxaha qowleysatada ah ee dhibaatada ku haya maraakiibta Ganacsiga.
Kadib kulan ay yeesheen mudanayaasha Baarlamaanka ayaa waxay ku ayyideen qorshe bilihii la soo dhaafay mas,uuliyiinta sare ee xukuumada Ankara ay galaangal ugu jireen kaasi oo ahaa in mudo kordhin hal sano ah loogu daro ciidankooda jooga xeebaha dalka, si ay u sii wadaan Howlgalkooda.
Inkastoo 10 bisha soo aadaan ee Febraayo lagu waday in uu Idlaado howlgalka ciidanka Turkiga ayaa hadane waxaa loogu daray mudo hal sano ah taasi oo ka dhigan in ay ku sii sugnaan doonaan ilaa iyo 10-ka bisha Febraayo ee sanadka soo aadan ee 2022-da.
Baarlamaanka Turkiga ayaa sheegay in ciidanka kaga sugan xeebaha Soomaaliya iyo Gacanka Cadmeed ay muhiim u yihiin sugida amniga maraakiibta iyo doomaha ganacsi ee laga leeyahay dalka Turkiga.
Xukuumada Ankara ayaa sidoo kale taageero xoogan oo isugu jirta dhanka maaliyada iyo tababaro ciidamada ah siisa dowlada, waxaana saldhig ciidan oo ah kan ugu weyn ee dhanka dibada ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Kan-xigaIGAD oo ka hadashay xiisada u dhaxeys...
Kan-horeJoe Biden oo maanta lagu wado in uu x...
60,006,180 unique visits